Ebe kachasị mma iji kpochapu Ngwaọrụ maka ndị mmepe - Nkọwapụta Nchịkọta Site na Semalt
A na-ejikarị ebe nrụọrụ weebụ eme ihe n'ọtụtụ ebe ụbọchị ndị a. Ọ bụ usoro mgbagwoju anya ma choo otutu oge na mgbalị. Otú ọ dị, ngwá ọrụ dị iche iche nke crawler weebụ nwere ike ime ka ọ dị mfe ma mezie usoro niile na-agba agba, na-eme ka ọ dị mfe ịnweta ma hazie - cell prices in lebanon. Ka anyị leba anya na ndepụta nke ngwa ngwa na-arụ ọrụ weebụ nke kachasị ike na nke bara uru ruo n'oge. Ngwaọrụ niile a kọwara n'okpuru ebe a dị ezigbo uru nye ndị mmepe na mmemme.
Scrapinghub bụ nbudata data ntanetịpụ na ntanetị arụmọrụ weebụ. Ọ na-enyere aka site na otu narị otu narị na ọtụtụ puku ndị mmepe ịnweta ozi bara uru n'enweghị nsogbu ọ bụla. Usoro ihe a na-eji Crawlera, nke bụ onye na-akwado proxy na smart na ịtụnanya. Ọ na-akwado nkwado site na-agafe ihe ndị na-egbochi bot na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ echedoro na-agafe n'ime sekọnd. Ọzọkwa, ọ na - enye gị ohere ịdepụta saịtị gị site na adreesị IP dịgasị iche na ebe dị iche iche n'enweghị ihe ọ bụla dị mkpa nke proxy management, ekele, ngwá ọrụ a na - abanye na ntinye nke API iji nweta ihe ndị a mere n'otu ntabi anya.
Dịka onye na-ahụ maka ntanetị weebụ, Dexi.io na-ahapụ gị nyocha ma wepụ ma saịtị dị mfe ma dị elu. Ọ na-enye nhọrọ isi atọ: Extractor, Crawler, na Pipes. Dexi.io bụ otu n'ime ihe nchọgharị weebụ magburu onwe ya ma ọ bụ ntanetị weebụ maka ndị mmepe..Ịnwere ike ịchekwa data amịpụtara na akụrụngwa gị / diski ike ma ọ bụ mee ka ọ kwadoro na ihe nkesa Dexi.io maka izu abụọ ma ọ bụ izu tupu e debe ya.
Webhose.io na-eme ka ndị mmepe na webmasters nweta data dị adị na ntanye ụdị ihe dị iche iche, tinyere vidiyo, ihe oyiyi , na ederede. Ị nwere ike iwepụ faịlụ ọzọ ma jiri ọtụtụ ụdị edemede dịka JSON, RSS, na XML iji nweta faịlụ gị n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ọzọkwa, ngwá ọrụ a na-enye aka ịnweta data akụkọ sitere na ngalaba Archive, nke pụtara na ị gaghị efu ihe ọ bụla maka ọnwa ole na ole na-esote. Ọ na-akwado ihe karịrị iri asatọ asụsụ.
4. Bubata. Yabụ:
Ndị mmepe nwere ike ịmepụta dataseti nzuzo ma ọ bụ bubata data si na ibe weebụ gaa CSV n'iji Import.io. Ọ bụ otu n'ime arụmọrụ kachasị mma na nke bara uru weebụ ma ọ bụ data mgbapụta. Ọ nwere ike wepụ 100+ peeji nke n'ime sekọnd ma mara maka API gbanwee ma dị ike, nke nwere ike ịchịkwa Import.io n'usoro ihe omume na-enye gị ohere ịnweta data a haziri nke ọma. Maka ahụmahụ ọkachamara ka mma, usoro a na-enye ngwa ọdịnala n'efu maka Mac os X, Linux na Windows na-enye gị ohere ibudata data ma ederede na ọdịdị oyiyi.
Ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara ọkachamara ma na-achọsi ike maka usoro ntanetị ike weebụ, ị ga-anwale 80legs. Ọ bụ ngwá ọrụ bara uru nke na-anabata data buru ibu ma na-enye anyị ngwa ngwa na-arụ ọrụ weebụ na-arụ ọrụ dị elu n'oge ọ bụla. Ọzọkwa, 80legs na-arụ ọrụ ngwa ngwa ma nwee ike ịwa ọtụtụ saịtị ma ọ bụ blọọgụ na obere sekọnd. Nke a ga-ahapụ gị ịchọta ozi ma ọ bụ nke ọhụụ nke akụkọ na mgbasa ozi mgbasa ozi, RSS na nri Atom, na blọọgụ njem nzuzo. O nwekwara ike ịchekwa data gị nke ọma na haziri nke ọma na faịlụ JSON ma ọ bụ Google Docs.